Audit သည်အာဖရိကဘောလုံး - teles relay တွင်သံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းသောငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကိုဖော်ပြသည်
အာဖရိကဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်ကြေးရှိသောပစ္စည်းများကိုသိမ်းဆည်းထားကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြခဲ့သည်။ အာဖရိကရှိဘောလုံးအားကစားအဖွဲ့ကိုစစ်ဆေးခြင်းသည်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာငွေကြေးဆိုင်ရာမမှန်မကန်ဖြစ်မှုကိုဖော်ထုတ်ပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည်တစ်နှစ်ကျော်ကြာသောဤမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသောအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမငြိမ်မသက်မှုများကြောင့်ခေါင်းဆောင်များအားနှိမ်နင်းရန်ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၊ အာဖရိကဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်သို့မဟုတ် , CAကိုင်ရိုအခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းမှအကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိတစု၏ဘဏ္emာရေးလုယက်မှုစွပ်စွဲချက်များအရအက်ဖ်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က၎င်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုလွတ်လပ်သောပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုလက်ခံခဲ့သည် ၎င်း၏သမ္မတအာမက်အာမက်သည်လည်းကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၏ကျင့် ၀ တ်ဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင်ပါဝင်သည် ဖီဖာနှင့်ပြင်သစ်အာဏာပိုင်များ။
စာရင်းကိုင်ကုမ္ပဏီမှစာမျက်နှာ ၅၅ မျက်နှာပါသောအစီရင်ခံစာ PWCကွန်ဖက်ဒရိတ်ကိုစစ်ဆေးရန်ငှားရမ်းခြင်းကကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း၏ခေါင်းဆောင်မှုကိုအလျင်အမြန်အရေးယူရန်တောင်းဆိုမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောပုံတစ်ပုံကိုသရုပ်ဖော်ထားသည်။ စာရင်းစစ်များကနယ်မြေဒေသအားလုံး၌ပြfootballနာများအပါအဝင်အာဖရိကဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်သို့တဆင့်ပေးပို့သောဒေါ်လာသန်းနှင့်ချီသောဘောလုံးဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေများဖြန့်ဝေခြင်းအပါအဝင်ပြfoundနာများတွေ့ရှိရသည် ဖီဖာ.
« ကျွန်ုပ်၏ကြောက်ရွံ့မှုများသည်အခြေအမြစ်ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်အလွန်အံ့အားသင့်သွားပြီးစိတ်ပျက်ခဲ့သည် "လိုင်ဘေးရီးယားဘောလုံးခေါင်းဆောင်ဟောင်းမူဆာဘီမူလီကဒီကိစ္စကိုတားမြစ်ခြင်းမပြုမီမေလမှာစာရင်းစစ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည် ဖီဖာ ဘောလုံးရန်ပုံငွေများကိုခိုးယူခြင်းအတွက်သူငြင်းဆိုသည်။
အဂတိလိုက်စားမှုနှင့်စွပ်စွဲချက်များကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည့်ကျယ်ပြန့်သောစွဲချက်တင်မှုကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတင်သွင်းစဉ်ကကမ္ဘာ့ဘောလုံးလောက၏ရင်ဆိုင်နေရသောကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှုစနစ်၏စိန်ခေါ်မှုများကိုထပ်မံအမှတ်ရစေခဲ့သည်။ ထိပ်တန်းအားကစားအရာရှိများကဆယ်စုနှစ်များစွာကျူးလွန်ခဲ့သောအမှားများ
နယူးယောက်တိုင်းမ်မှရရှိသော PwC အစီရင်ခံစာအကျဉ်းချုပ်သည်စိတ်ရှုပ်စရာသတင်းအချက်အလက်များစွာကိုတင်ပြသည်။ အစီရင်ခံစာ၏စာရေးသူက " စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့်အာဏာအလွဲသုံးစားမှုတို့၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအရာများကိုဘဏ္financeာရေးနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၏အဓိကနေရာများတွင်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည် , CAF. "။
အဆိုပါအစီရင်ခံစာကြောင်းဖော်ပြသည် ဖီဖာ ၂၀၁၅ မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိအာဖရိကအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အားစုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၅၁ သန်းလှူဒါန်းခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ ဒေါ်လာ ၂၄ သန်းခန့်ကိုအာဖရိကဘောလုံးအရာရှိများကပေးခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၁၀ သန်းပေးချေမှု ၄၀ ကိုစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်စာရင်းစစ်များကငွေပေးချေမှု ၅ ခု၊ စုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၁.၆ သန်းသာရှိသည်။ ငွေများကိုမည်သည့်အတွက်သုံးစွဲရမည်ကိုအတည်ပြုရန်လုံလောက်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူပါရှိသည်။ အခြားသူများတွင်သတင်းအချက်အလက်မရှိခြင်းကြောင့်အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်ရန်ပုံငွေ၏အကျိုးခံစားခွင့်များကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
စာရင်းစစ်များသည်မှတ်တမ်းများအရ၎င်းတို့အားအလုပ်များစွာမလုပ်ရန်တားမြစ်ထားကြောင်းရေးသားခဲ့သည်။ အများအပြားကလက်စွဲစာအုပ်ချိန်ညှိရန်စိတ်မချရနှင့်စိတ်မချရဖြစ်ကြသည် "။
La ဖီဖာ ယခုအချိန်အထိမှတ်ချက်ပေးရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
ဤရွေ့ကားဗျာဒိတ်တော်ပြီးနောက်တစ်ပါတ်လာကြ၏ ဖီဖာ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ် Fatma Samoura ဦး ဆောင်သောမစ်ရှင်အဖွဲ့သည်အာဖရိကဘောလုံးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပြန်လည်ထူထောင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ပြီးဆုံးခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်ဇူးရစ်မြို့ရှိဌာနချုပ်သို့ပြန်လာလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
New York Times မှဘာသာပြန်ထားသော
ဘယ်လ်ဂျီယံ - Koen Geens နန်းတော်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်
CAF - အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီသည်အာမက်အာမက်နှင့်ပေါင်းစည်းပြီး PwC စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာကိုစွဲချက်တင်သည်